ESI GBANWEE PROCESSOR NA LAPTỌỌPỤ - WINDOWS - 2019
Na-agbanwe ihe nhazi na laptọọpụ
Usoro Hamachi bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ịmepụta netwọk nke ọma. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ bara uru, na mmepe nke isiokwu a ga-enyere gị aka.
Tupu ị soro enyi gị na hamachi egwu, ịkwesịrị ibudata ngwugwu nwụnye.
Download Hamachi site na saịtị gọọmentị
N'otu oge ahụ, ọ ka mma idebanye aha ozugbo na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. Ọ naghị ewe oge buru ibu, ma ọ ga-emewanye ọrụ nke ọrụ ahụ na 100%. Ọ dị mma ịchọrọ na ọ bụrụ na enwere nsogbu mgbe ị na-eke netwọk n'usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ime nke a site na ebe nrụọrụ weebụ ma "kpọọ" PC gị na usoro mmemme ahụ. Gụkwuo banyere nke a n'isiokwu ọzọ.
Mgbape mbụ maka ọtụtụ kwesịrị ịbụ ihe kachasị mfe. Naanị ị ga-agbanye na netwọk ahụ, tinye aha kọmputa ahụ achọrọ ma malite iji netwọk arụmọrụ.
Lelee ma ihe omume a dị njikere ịrụ ọrụ na Ịntanetị, ị nwere ike iji njikọ Windows njikọ. Ịkwesịrị ịga "Network and Sharing Center" wee họrọ "Ngbanwe mgbanwe nkwụnye".
Ị ga-ahụ foto na-esonụ:
Nke ahụ bụ, netwọk ọrụ na-akpọ Hamachi.
Ugbu a ị nwere ike ịmepụta netwọk ma ọ bụ jikọọ na otu dị. Nke a bụ otu ị nwere ike isi egwu site na hamachi, nakwa na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ na LAN ma ọ bụ Njikọ IP.
Pịa "Jikọọ na netwọk dị ugbu a ...", tinye "ID" (aha netwọk) na paswọọdụ (ọ bụrụ na ọ bụghị, wee hapụ oghere ogwe). Ọtụtụ mgbe, obodo ndị na-egwu egwu na-enweta netwọk ha, na netwọk netwọk ndị na-eme egwuregwu, na-akpọ ndị mmadụ otu egwuregwu ma ọ bụ ọzọ.
Ọ bụrụ na njehie "netwọk a nwere ike ịmejupụta" pụtara, enwereghị ohere ịhapụ n'efu. Ya mere, iji jikọọ na-enweghị "nchụpụ" nke ndị ọrụ na-adịghị arụ ọrụ agaghị arụ ọrụ.
Na egwuregwu ahụ, ọ ga-ezuru ịchọta isi nke egwuregwu netwọk (Ọtụtụ, Online, Jikọọ na IP, na ihe ndị ọzọ) ma gosipụta na IP gị gosiri n'elu usoro ihe omume ahụ. Egwuregwu ọ bụla nwere àgwà nke ya, mana n'ozuzu usoro njikọ ahụ bụ otu. Ọ bụrụ na a kpochapụrụ gị ozugbo site na ihe nkesa ahụ, ọ pụtara na ọ jupụtara, ma ọ bụ ihe omume ahụ na-egbochi firewall / antivirus / firewall (ịkwesịrị ịgbakwunye Hamachi na ndị ọzọ).
Ịmepụta netwọk gị
Ọ bụrụ na ị maghị ID na paswọọdụ gaa netwọk ọha na eze, ị nwere ike ịmepụta netwọk nke gị mgbe niile ma kpọọ ndị enyi gị n'ebe ahụ. Iji mee nke a, pịa "Mepụta netwọk ọhụrụ" ma jupụta n'ọhịa: aha netwọk na paswọọdụ ugboro abụọ. Ijikwa netwọk gị dị mfe site na mbipụta weebụ LogMeIn Hamachi.
Ugbu a ị nwere ike ịgwa ndị enyi gị ma ọ bụ ndị agụụ na-agụ na Internet ihe ID na paswọọdụ ha iji jikọọ. Ọdịnaya netwọk bụ ibu ọrụ. Gbanyụọ usoro ihe omume ahụ karịa ka o kwere omume. Enweghị ya, ike netwọk nke egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu IP adịghị arụ ọrụ. Na egwuregwu ị ga-ejikọta onwe gị site na iji adreesị mpaghara.
Usoro ihe omume a bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-egwu na netwọk, ma na Hamachi ka mgbagwoju anya nke ọrụ na ọrụ dị mma. N'ụzọ dị mwute, nsogbu nwere ike ibili n'ihi nhazi nke usoro ihe omume ahụ. Gụkwuo na isiokwu banyere ịmepụta nsogbu na oghere na iwepu gburugburu.